profile Company - Xizi wiishka Co., Ltd
XIZI KU SAABSAN
XIZI wiishka CO., LTD waa hoosaad ah, daacad laga leeyahay ee XIZI UHC, iyadoo magaca ah "XIZI" (loo yaqaan "XIZI") ee. Shirkadda lala beegsaday suuqa-dhamaadka sare, waxs horumarka la taaban karo ee istaraatiijiga ah ee ganacsiga wiishka of XIZI UHC. XIZI brand wuxuu noqon karaa dib u qorin ilaa sannadda 1981. Ilaa hadda, taasi brand cross-qarnigii ayaa socday muddo ka badan 30 sano, oo ku Arzaaqay oo xal gaadiidka dhismaha ugu fiican in ka badan 60 dal iyo gobollada ee dunida, si joogto ah ku guuleystay aqoonsi suuqa iyo kalsooni wehelkaaga. XIZI waa joogto ah ka bilaabay inuu dhamaadka, ku adkaysanaya inay dib fundament, bixiyey waxyaabaha kaamil ah halka joogi run in howlgalka.
Xarunta XIZI waxa uu ku yaalaa at harada ee Qingshan Lake loo yaqaan "ee Green Silicon Valley". Shirkadda ayaa magaalada diiwaangashan ee RMB 2.155 million yuan oo ku saabsan 3,000 oo shaqaale ah. Waa-dhamaadka sare ganacsi oo keentay wiishka ee Shiinaha, xoogga on design dhafan, R & D, soo saaridda, marketing, rakibaadda iyo adeegga alaabta escalator-iibka ka dib. Products shirkadda ku lug wiishka rakaabka, wiishka dusha, Machine elevaror roonless, wiishka isbitaalka, wiishka xamuulka, escalator, la maro dhaqaaqin, guriga wiishka iwm, ee 8 taxane iyo in ka badan 10 nooc oo wiishka.
Shirkadda ayaa cag in industry ee muddo ku dhow 35 sano, ayaa cilmi baadhis adag iyo xoog-abuurnimo. Hadda waxa uu leeyahay in ka badan 300 shaqaale farsamo, 60 mashruuc oo patent, fulisaa 20 mashruuc cilmi-baarista iyo horumarka muhiimka ah iyo furayey 3 ama 4 waxyaabaha cusub averagely sanadkiiba. Dhanka kale, shirkadda corporately qotomiyey XIZI Research Institute of University Zhejiang la University Zhejiang. ballaadhan Wadashaqaynta jaamacadaha caan ah sida University Tsinghua iyo Shanghai Jiaotong University, XIZI ayaa aasaasay ay xarunta R & D xarunta, wax soo saarka & saaridda, saddex madal ee xarunta kormeerka tayada koorsada of raad takhasuska ah ee wax soo saarka, casriyeynta ee soo saarta iyo furasho ah oo ganacsi. Hoggaansanaayeen fikirka ah "horumarka la Times, Continuous Innovation", shirkada waxaa mar walba lagu hayo tartan xoog leh.
Shirkadda ayaa mar horeba shahaado by ISO9001 Quality Management System, Nidaamka Maareynta Deegaanka ISO14001, OHSAS18001 Shaqo Caafimaadka iyo Management System Ammaanka iyo shahaado Siddo suuqa heerka ugu sarreeya dunida oo, sida shahaado CE for Siddo suuqa EU ee keentay wax soo saarka, shahaado CSA for North Siddo suuqa America, iwm shirkada haysto liisan of heer sare ah soo saarta in industry gudaha iyo heerka A rakibo, isbadal iyo ogolaanshaha dayactirka.
Shabakadda marketing shirkadda foomamka qaab istiraatiiji ah "Mid ka mid ah xarunta, shanta gobol ee waa weyn", iyadoo wax soo saarka la kordhiyo oo dhan qeybo ka mid ah dalka. XIZI ayaa qotomiyey 34 xafiisyo iyo 28 hay'adaha ee magaalooyinka kala duwan ee gobolada dhexe, sida Hangzhou, Jinan, Changsha, xeebaha geeska Afrika, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Xi'an, Hefei iyo Nanjing, iwm, oo ballanqaadaya bixinta "one-stop" adeeg buuxa si ay macaamiisha qalabka wiishka waxaa laga dhoofiyey in 70 dal iyo meelaha ay ka mid yihiin Europe, Bariga Dhexe, Southeast Asia iyo Australia, iwm in Dhanka ah., sida shirkaddu ay ku aasaasay hay'adaha kala duwan gaar ah oo muddo dheer istiraatiiji-hawlgalayaasha iskaashi iyo sameeyay si fiican loo aasaasay iibka oversea iyo nidaamka adeegga.
"Daacadnimo adeegga wiishka kasta, waxay siiyaan ammaan iyo waarta waxyaabaha macaamiisha" waa falsafad ganacsiga ee XIZI ah. Shirkadda ayaa sheegay in ruuxa ganacsi ee raacdada joogto ah ammaanka, hufnaanta, tamar-keydinta iyo gargaarka badeecada, si ay u siiyaan technology heer caalami ah, wax soo saarka iyo adeega macaamiisha.